Dorna mampientanentana ny mpijery MotoGP amin'ny alàlan'ny sary virtoaly Viz Arena sy sary mitombo | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Creation » Dorna dia nampientanentana ny mpijery MotoGP nijery ny sary Viz Arena virtoaly sy nampitombo ny zava-misy
MotoGP ™, tontolon'ny hazakazaka môtô tsara indrindra eto an-tany, ahitana mpitaingina mpitondra môtô manerantany ary môtô haingam-pandeha ary haingam-pandeha indrindra, dia mampientanentana ny mpijery amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny sary mihetsika mampiasa rindrambaiko Viz Arena avy amin'ny Vizrt.
Viz Arena dia manatsara ny fandrakofana ara-panatanjahantena mandritra ny fampielezam-peo mivantana miaraka amin'ny sary virtoaly sy mihamitombo izay nampiana sary miorina amin'ny kianja filalaovana, eo ambanin'ny mpilalao eny an-kianja, na amin'ny tranga MotoGP, eo amin'ny làlambe.
Dorna, tompona zon'ny orinasa ara-barotra sy fahita manokana amin'ny MotoGP ary tompon-daka amin'ny hazakazaka môtô hafa, dia nanomboka nanandrana tamin'ny Viz Arena tamin'ny faran'ny vanim-potoana 2019. Na eo aza ny fanemorana ny drafi-pivoaran'ny areti-mandringana, MotoGP dia niverina nidina an-tsipika tamin'ny volana Jolay niaraka tamin'ny Viz Arena nampiasaina hatramin'ny voalohany tamin'ny fandaharana mivantana.
“Ny mpankafy anay dia maniry fatratra ny angon-drakitra tena izy mandritra ny hazakazaka izay manampy amin'ny fitantarana ny tantara miseho eny an-dalana. Zava-dehibe toy ny hazakazaka ihany ”, hoy izy Sergi Sendra, Tale zoky, Votoatin'ny haino aman-jery, sampan-draharaha teknika ary famokarana ao Dorna. “Ny Viz Arena dia manampy anay amin'ny fomba mahasarika maso izay mitondra fientanam-po bebe kokoa ho an'ny mpijery azy.”
"Ny fanatsarana sary virtoaly dia azo ampiharina amin'ny alàlan'ny Viz Arena amin'ny hetsika fanatanjahan-tena rehetra," hoy izy Jonathan Roberts, lehiben'ny Global Vizrt Sports. "Ny dingan'ny fikajiana sy ny fizotran'ny tarehin-tsary dia tsotra miaraka amin'ny fiofanana kely ho an'ireo mpandraharaha."
Mampiasa tsy manam-paharoa sy matanjaka i Viz Arena fanaraha-maso fakantsary miorina amin'ny sary sy fanodinana sary hanomezana lanja ny mpanjifa. Ity teknolojia ity dia ahafahana manara-maso ny fakantsary amin'ny fotoana tena izy, miorina amin'ny tsiranoka video fotsiny ary ahafahana mampiditra sary virtoaly avy amin'ny studio. Raha tsy mila lohan'ny fanarahana mekanika ianao, Viz Arena dia manome valiny mahavariana mahavonjy vola sy enti-miasa, fa ny tena zava-dehibe dia ny fampihenana ny kianja na ny dian-tongotra. Ny sandan'ny fametrahana rindrambaiko madio sy vahaolana mifototra amin'ny sary dia mitombo mandritra ny areti-mandringana satria mamela ny mpanjifa hamokatra atiny lavitra tsy mila olona na fitaovana eo an-toerana.
Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fomba VizrtIreo vokatra fitantarana an-tsary nofaritana momba ny lozisialy dia miteraka fientanam-pon'ny mpijery amin'ny MotoGP miaraka amin'i Dorna, kitiho Eto ary Eto. Viz Arena dia nanolotra ny fampanantenan'ny 'tantara maro, voalaza kokoa,' ny tanjon'ireo Vizrt Group.
Previous: Fetiben'ny literatiora Cheltenham Powered by Blackmagic Design
Next: Mankalaza ny faha-15 taonan'ny fankalazana ny haitao sy fanavaozana ny HPA